Nin u dhashay Britain oo xabsi lagu xukumay Dalka Singapore kadib markii uusan xiran maaskaro
HomeWararka CaalamkaNin u dhashay Britain oo xabsi lagu xukumay Dalka Singapore kadib markii uusan xiran maaskaro
August 19, 2021 Wararka Caalamka, Wararka Maanta Somaliska 0
Nin British ah ayaa lagu xukumay lix toddobaad oo xabsi ah Singapore ka dib markii uusan xiran maaskaro sida ay xaqiijiyeen saraakiisha Khamiistii.
Caasimada, dalkaasi ayaaa sameestay sharciyo adag dadka jebiya xeerarka fayraska, waxaana jiray dhowr kiis oo ajaanib ah oo la ciqaabay.
Benjamin Glynn ayaa la xiray kadib markii muuqaal laga duubay isagoo aan maaskaro ku xirnayn tareenka bishii May.
40 jirkan ayaa markii dambe dhibaateeyay booliska loo soo diray si ay u soo xiraan, wuxuuna diiday inuu xirto wejiga daboolista intii maxkamad la horkeenay bishii hore.
Sida ay wararku sheegayaan, Glynn ayaa maxkamadda horteeda ka jeediyay hadal-ku-sheeg uu dacwaddan ku tilmaamay mid “fool-xun” iyo “wax laga yaqyaqsoodo”-wuxuuna sheegay in maaskaro aysan wax ku ool ahayn ka hortagga faafitaanka Covid-19.